Ity Politika Cookie ity dia mamaritra ny fomba manazava ny fomba Sorrento Therapeutics, Inc. sy ireo mpiara-miombon'antoka aminy ary ny sampana (miara-mientana, "Sorrento, ""us, ""we, "Na"ny”) mampiasa cookies sy teknolojia mitovitovy amin'izany mifandraika amin'ny tranokala, fampiharana ary vavahadin-tserasera izay iasanay mifandray amin'ity Politika Cookie ity (miaraka amin'ny "Site”) manome, manatsara, mampiroborobo ary miaro ny tranokala ary araka ny voalaza etsy ambany.
Ny cookie dia lahatsoratra kely alefa amin'ny navigateur anao rehefa mitsidika ny Site ianao. Izy io dia manana fiasa isan-karazany, toy ny fanomezan-dàlana anay hahatsiaro ny fampahalalana sasany omenao anay rehefa mivezivezy eo anelanelan'ny pejy ao amin'ny Site ianao. Ny cookie tsirairay dia tapitra aorian'ny fe-potoana voafaritra arakaraky ny fampiasana azy. Mahasoa ny cookies satria manampy anay hahafinaritra kokoa ny traikefanao amin'ny Site. Izy ireo dia mamela anay hamantatra ny fitaovanao (ohatra ny solosainao na ny findainao) mba hahafahantsika mampifanaraka ny traikefanao amin'ny Site.
Nahoana isika no mampiasa cookies?
Mampiasa cookies ho an'ny antoko voalohany sy antoko fahatelo izahay noho ny antony maro, toy ny famelana anao hivezivezy eo anelanelan'ny pejy amin'ny fomba mahomby, fitadidiana ny safidinao, mamela anay handinika ny fomba fiasan'ny tranokalanay, ary hanatsarana ny traikefanao. Ny cookies sasany dia takiana noho ny antony ara-teknika mba ahafahan'ny tranokalanay miasa. Ny cookies hafa dia ahafahantsika sy ireo antoko fahatelo miara-miasa aminay hanara-maso sy mikendry ny tombontsoan'ny mpitsidika ny tranokalanay. Ohatra, mampiasa cookies izahay mba hampifanaraka ny votoaty sy ny fampahalalana izay mety halefanay na asehonay aminao ary raha tsy izany dia mampifanaraka ny traikefanao rehefa mifandray amin'ny tranokalanay izahay ary raha tsy izany dia manatsara ny fiasan'ny serivisy omenay. Ny antoko fahatelo koa dia manolotra mofomamy amin'ny alàlan'ny tranokalanay ho an'ny dokam-barotra, fanadihadiana ary tanjona hafa. Izany dia voafaritra amin'ny antsipiriany etsy ambany.
Inona no cookies ampiasainay?
Ireo cookies ireo dia tena ilaina mba hanomezana anao ny Site sy hampiasa ny sasany amin'ireo endri-javatra, toy ny fidirana amin'ny faritra azo antoka. Satria ireo cookies ireo dia tena ilaina amin'ny fanaterana ny Site, tsy afaka mandà azy ireo ianao raha tsy misy fiantraikany amin'ny fiasan'ny Site. Mety ho azonao atao ny manakana na mamafa cookies tena ilaina amin'ny fanovana ny firafitry ny navigateur.
Ohatra amin'ny cookies tena ilaina azontsika ampiasaina dia ahitana ireto tolotra manaraka ireto:
Performance sy Analytics, Personalization, ary Security
Ireo cookies ireo dia manampy anay hamakafaka ny fomba idirana sy ampiasana ny serivisy, ahafahantsika manara-maso ny zava-bita ary miaro ny tranokala. Ohatra, mampiasa cookies izahay mba hahazoana fanazavana momba ny mpampiasa sy ny zava-bitan'ny tranokala, toy ny hafainganan'ny pejy na hanampiana anay hanamboatra ny tranokalanay sy serivisy ho anao mba hanatsarana ny traikefanao.
Ohatra amin'ny fampandehanana sy famakafakana, fanamboarana manokana ary cookies fiarovana azonay ampiasaina ireto tolotra manaraka ireto:
Afaka mianatra bebe kokoa momba ny cookies Google Analytics ianao amin'ny fipihana Eto ary momba ny fomba iarovan'i Google ny angonao amin'ny fanindriana Eto. Mba hialana amin'ny Google Analytics dia azonao atao ny misintona sy mametraka ny Add-on Google Analytics Opt-out Browser, misy Eto.
Cookies mikendry na dokam-barotra
Ireo cookies ireo dia ampiasaina mba hahatonga ny hafatra momba ny dokam-barotra mifandraika aminao sy ny tombontsoanao. Mampiasa cookies aterin'ny antoko fahatelo izahay indraindray mba hanaraha-maso ny fahombiazan'ny dokam-barotray. Ohatra, tadidin'ireo cookies ireo hoe iza no mpitsikilo nitsidika ny tranokalanay. Ity dingana ity dia manampy anay hitantana sy hanara-maso ny fahombiazan'ny ezaka ara-barotra ataonay.
Ohatra amin'ny cookie mikendry na manao dokam-barotra mety hampiasaintsika ireto tolotra manaraka ireto:
Adobe Auditors Manager
Azonao atao ny mianatra bebe kokoa momba ny fomba fampiasan'i Google ny cookies ho an'ny tanjona dokam-barotra sy ny toromarika hialana amin'ny fipihana Eto. Azonao atao ny miala amin'ny Adobe Experience Cloud Advertising Services amin'ny fitsidihana ny tranokalany ary misafidy ny safidy "miala". Eto.
Ahoana no fitantanana cookies?
Ny ankamaroan'ny mpitety tranonkala dia mamela anao hanala sy/na hanajanona ny fanekena cookies amin'ny tranokala tsidihinao. Mba hanaovana izany, araho ny toromarika ao amin'ny firafitry ny navigateur. Maro ny mpitety tranonkala manaiky cookies amin'ny alàlan'ny default mandra-panovanao ny fikao. Raha tsy manaiky mofomamy ianao, na izany aza, dia mety tsy ho afaka hampiasa ny fiasa rehetra amin'ny tranokala ianao ary mety tsy mandeha tsara. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny cookies, ao anatin'izany ny fomba hijerena ny cookies napetraka ao amin'ny navigateur sy ny fomba fitantanana sy famafana azy ireo, tsidiho www.allaboutcookies.org.
Tsidiho ny politika fiarovana fiainan'olona raha mila fanazavana fanampiny momba ny safidinao mifandraika amin'ny mombamomba anao manokana, ao anatin'izany ny torolalana fanampiny momba ny fialana amin'ny dokam-barotra mifototra amin'ny fahalianana.
Fanavaozana ny Politika Cookie
Mety havaozinay tsindraindray ity Politikan'ny Cookie ity mba hisaintsainana, ohatra, ny fiovan'ny cookies ampiasainay na noho ny antony hafa miasa, ara-dalàna, na ara-dalàna. Azafady, tsidiho tsy tapaka ity Politikan'ny Cookie ity mba hahazoana vaovao momba ny fampiasanay cookies sy ny teknolojia mifandraika amin'izany. Ny daty eo amin'ny farany ambany amin'ity Politika Cookie ity dia manondro ny fotoana nanavaozana azy farany.
Aiza no ahazoanao fanazavana fanampiny?
Raha manana fanontaniana momba ny fampiasanay cookies na teknolojia hafa izahay dia andefaso mailaka izahay privacy@sorrentotherapeutics.com.
Nohavaozina farany: 14 jona 2021